トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Ny maha samy hafa ny raharaha politika noho ny toerana misy ny pachinko efi-trano (Station Agents & suburban fivarotana)
Ny tsena, mihevitra aho fa izay manao raharaham-barotra miaraka amin'ny fitaovana isan-karazany amin'ny toerana toe-piainana. Pachinko tsy afa, dia manana isan-karazany isan-karazany sy ny fepetra, ny raharaham-barotra sy ny fanaovana ny fitehirizana ny sary amin'ny alalan'ny toe-javatra toerana. Ohatra, teo anoloan'ny gara suburban toeram-pivarotana sy ny fivarotana, ny maha samy hafa ny endri-javatra lehibe. Andeha hampitaha ny maha samy hafa ny amin'ny andro sy ny mpanjifa fototra tampon'isan'ny fandidiana.
■ pachinko parlors mba hanatanteraka raharaham-barotra ao amin'ny Fiozao ara-potoana
Station teo anoloan'ny efi-trano pachinko amin'ny gara ny mpanjifa fototra sy ny tampon'isan'ny mihazakazaka, tony fivarotana maro afovoan-tan?nan'i fifamoivoizana mpandeha an-tongotra. Fa akaikin'ny gara, ary ny birao mpanao vehivavy mpikarakara tokantrano, ary ny zokiolona sy ny lalana an-trano avy niasa avy amin'ny tanora lehilahy sy vehivavy, dia manantena ny mpanjifa fototry ny taona isan-karazany. Indrindra indrindra, izany fihetsika mahazatra kokoa eo amin'ny andavanandro. Nandritra ny hariva hatramin'ny maraina, fa tsara, toy ny vehivavy mpikarakara tokantrano, ary ny zokiolona maro, indrindra fa ny tarika no ho vehivavy matetika ny fotoana.
Fa eo anoloan'ny amin'ny gara tampon'isan'ny asa dia toy izany avy eto. Hatramin'ny hariva avy indray dia tsara kokoa, izay efa tonga tany amin'ny toeram-pivarotana avy
maraina, eo nosoloina ny fanao, tamin'ity indray mitoraka ity ny mpiasa mpikarama rehefa avy niasa hanomboka no mandrafitra ny ankamaroan'ny hetsika. Araka ny amin'ity indray mitoraka ity, inona no turnover ny mpanjifa fototra mafy hoe, 's ny endri-javatra lehibe indrindra teo anoloan'ny toeram-pivarotana amin'ny gara.
tsena izay misy fotoana ny zavatra mampalahelo ny asa ny amin'io teny io, satria misy mpividy hiverina ariana na dia amin'ny fototra mafy, ho toy ny anankiray amin'ny safidy koa, satria mikendry teo.
in mirehitra toerany teo anatrehan'i ny fifaninanana, ny fivarotana tsy afaka manintona mpanjifa amin'ny 7 ora hariva, na 8 ora alina eo amin'ny andavanandro 6 ora, dia lasa sarotra manana tafavoaka velona.
(※ Fa izany eo ihany, raha toa ny fivarotana tsy maintsy hanitsy ny baolina ny zavatra amin'ny ROM Yara Horukon, safidy dia ny haka ho eo amin'ity Fiozao ara-potoana.) _ x000D_
Na izany aza, ho an'ny mpiasa karamaina fety dia fety, ilay fandidiana Nahatratra sy ny hariva amin'ny mitataovovonana, dia ho hafa tanteraka fizotran'ny sy andavanandro. Ankoatra izany, satria matetika ny fifaninanana fivarotana, dia raha vao baolina avy tany amin'ny toeram-pivarotana hafa, no hatao ny fandidiana niova be.
■ suburban pachinko efi-trano sy ny fara tampony mpanjifa fototra Tamin'ny Fiozao ara-potoana
ny asa, ka ataovy hoe: Ahoana ny amin'ny suburban fivarotana, dia aza manantena ny haben'ny ny mpanjifa fototra ny momba Station tsena. Raha niresaka momba mpitsidika, ary ny Ray ny mpiara-monina sy ny fitsaharana vehivavy mpikarakara tokantrano, taona koa tao ambony, dia mahita be dia be ny endriky ny olona, ??toy ny avy amin'ny 40s 60.
vahiny ny fahalalana haavon'ny dia somary ambany, dia maro, misy koa ny fironana maro izay foana tsy mitondra fanatitra mamy latabatry ny mafy fototra sy ny fantsika fanitsiana.
raha mbola tahaka ny tsy malaza toeram-pisakafoanana ny ampy ny miantso ny tsaho tao amin'ny tany manodidina ny pachinko efi-trano, izay toeram dia nitsidika ny fiara na moto, na ny toy, misy, izany tsy midika bebe kokoa, ka na dia ireo izay avy any amin'ny magazay avy Vao maraina be tsy fa maro ny toe-quo.
maro an'isa, fa raha miaina ao amin'ny faritra avy any amin'ny toeram-pivarotana, dia mihazakazaka, manomboka amin'ny 12 ora elongation aloha sy aorian'ny ny tolakandro, dia hanana vokatra tampon'isan'ny fivarotana maro manodidina ny 3:00 PM avy amin'ny 1 ora hariva. Ary, suburban fivarotana ianao dia misy maha samy hafa kely ny tampon'isan'ny asa amin'ny andro amin'ny herinandro. Na dia misy mifaninana fivarotana, satria tsy izay manakaiky, dia mora ny hanisy raikitra mpanjifa.
dia ny hampiasa avy amin'ny fantsakana ao ady Miorina amin'ny endri-javatra ireo ???
1. Hiezaka koa ny Fiozao ara-potoana
fivarotana ny toerana misy ny tendrony, satria ny fotoana amin'ny izay ny fandidiana dia mivelatra dia tsy mitovy, dia toy ny anankiray amin'ny tetika haka no soa tokony ho eny ny fotoana mafana indrindra ny andro. Amin'ny maha-pachinko efi-trano, mazava ho azy, fa ny olona izay namoaka ny baolina avy be rehefa misy utilisation avo ny tahan'ny tsy natao tamin'ny antso ny toeram-pivarotana, dia tsy mikendry teo.
2. Tamin'ny fotoana izay ny fotoana amin'ny
mpanjifa mpanjifa mifamadika fifampaherezana dia mora mamy latabatry ny mafy fototra sy ny fihantonan-javatra mety haka. Ny antony dia satria, ohatra, ao amin'ny raharaha ny vehivavy mpikarakara tokantrano, ary tsy hisy toy inona ny fahafatesana no mahery, ka tsy mila ny fanomanana ny sakafo hariva, dia manana be dia be ny olona izay niverina tamin'ny fo izany. Pachipuro izay mahazo amin'ny tetika izay handray izany ihany koa ny sehatra misy. _x00 0D_
3. Ny fikarohana ny fahalalana
haavon'ny mpanjifa fototra ny mpanjifa, no antony Mazava araka izany fa ny haavon'ny ny mpanatrika izay. Level misy ihany koa ny mety matsiro foana tsy mitondra fanatitra fa ny faladiany ho ambany dia ambany toy ny olona miantsena matetika. Mazava ho azy, ny zava-misy fa olona amin'ny ambaratonga avo tsy olona na dia iray aza, fa mety ho tonga ao ny zava-misy fa ny fivarotana tsy misy tsirony mihitsy, Sajikagen amin'ny ankilany roa: dia handeha ihany no mandamina ny traikefa amin'ny ady tsy.